Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitiliana Covid-19 : 5 hetsy ariary ny kolikoly eny Ivato
Fitiliana Covid-19 : 5 hetsy ariary ny kolikoly eny Ivato
Amin’izao fotoana izao dia mandoa “100 euros” na 500.000 ariary dia tsy manao “test-covid 19” na ny fitiliana ny “covid-19” eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo mpandeha avy any ivelany. Araka ny lalàna dia mbola ao anatin’ny sakana aram-pahasalamana tanteraka ny firenena Malagasy. Ny fanaovana fitiliana ireo mpandeha rehetra avy any ivelany dia fepetra tsy maintsy atao raha tonga eto Madagasikara. Fitiliana in-teno miatoana no tsy maintsy tanterahana eny Ivato noho izany. Ny olona rehetra nefa dia tsy maintsy mihiboka any amin’ny hotely izay tiany izay nahazo fahazahoan-dàlana tamin’ny fanjakana. Rehefa voaporofo fa tsy misy ny valanaretina “covid-19” ity dia mahazo mody avy hatrany. Ny olona tonga ihany no mandoa ny saran’ny hotely amin’izany.
Misy nefa ny olona izay tsy mihiboka izany mihitsy rehefa mandoa “100 euros” amin’ireo olona mpanao ity fitiliana ity. Avy hatrany dia mahazo mody any an-trano izy ireo. Raha kely dia hatrany amin’ny olona 20 isakin’ny fiaramanidina avy any ivelany iray tonga no manao ity kolikoly ity. Vola hatrany amin’ny “2000 euros” na 10 tapitrisa ariary no azo amin’izany.Mazava hoazy izany fa tsy maintsy ho tafiditra ny “variant vaovao ny covid-19” noho izao kolikoly sy gaboraraka misy iz ao toa ny mahazo ny Nosy Maurice sy La Réunion amin’izao fotoana izao. Marihina fa mbola tsy tapitra ny fiparitahan’ny covid-19 na tsy manome tarehi-marika intsony ny fanjakana.
Tambazotra iray lehibe eo amin’ny seranam-piaramanidina ivato koa ity raharaha ity. Mpitsabo,polisy sy zandary ary ireo mpiasan’ny ladoany no ao anatiny izany. Tsy afaka miady amin’ny kolikoly ny fanjakana Malagasy satria malemy. Tsy ny resaka toe-karena ihany no anjakan’ity raharaha ity fa miantraika hatrany amin’ny fahasalanana sy ny aina. Resabe fotsiny ankehitriny ny voalaza amin’ny PGE (politika ankapoben’ny governemanta ) amin’ny andininy voalohany milaza fa hiady tsy misy indrafo amin’ny risoriso ny fanjakana.